Faha-60 taonan'ny fahaleovantena :: Hanomboka ny fanomanana an'ireo hetsika samihafa • AoRaha
Faha-60 taonan’ny fahaleovantena Hanomboka ny fanomanana an’ireo hetsika samihafa
Hiroso amin’ny fikarakarana ny fanamarihana ny faha-60 taona niverenan’ny Fahaleovantenan’i Madagasikara amin’izay ireo mpikambana ao anatin’ny komity mpandrindra ny hetsika fankalazana ny Fetim-pirenena. « Iny lahatenin’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, tamin’ny alahady teo iny, no manamarika amin’ny fomba ofisialy ny fanombohana ny hetsika rehetra hatao », hoy ny jeneraly Randrianatoandro James Guerson, mpitarika ny komity mpanomana ny Fetimpirenena, omaly.
Hivory tsy an-kiato hamaritra ny fandaharam-potoana mikasika ny matso sy ireo hetsika manodidina an’izany ny komity, amin’ity herinandro ity. « Efa nisy hatrany ny fivoriana sy ny asa notanterahin’ireo vaomiera manokana mpikarakara. Hiarahana amin’ny Fiadidiana ny Repoblika amin’izay ny fankatoavana an’ireo fandaharam-potoana rehetra, manomboka izao », hoy ihany io manamboninahitra io.
Re fa tokony hanomboka amin’ny faran’ity volana mey ity ny fanamarihana ny tsingerin-taona faha-60 niverenan’ny fahaleovantenantsika. « Mila iverenana dinihina ny fametrahana an’ireo daty naroso teo aloha. Hoampahafantarina miandalana eo ihany ny votoatiny. Isika rahateo mbola ao anatin’ny fampiharana an’ireo fepetran’ny hamehana ara-pahasalamana, amin’izao fotoana izao », araka ny fanampim-panazavan’ny jeneraly Randrianatoandro James Guerson.
Fanajana ny fihibohana :: Nampitandremin’ny Filoha Mitanilanila ireo olom-panjakana sy ny vahoaka
Fitateram-bahoaka :: Vitsy sisa ireo taksibe mampiasa tsiranoka fanasan-tanana